Akakwirira Kumusoro ECOVID Nyaya Dzakambogara uye Dzichikwira muHawaii Ipo Tourism iri Kuwedzera
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Akakwirira Kumusoro ECOVID Nyaya Dzakambogara uye Dzichikwira muHawaii Ipo Tourism iri Kuwedzera
Kuputsa Kufamba Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Gavhuna weHawaii David Ige naLieutenant-Gavhuna Josh Green
Hawaii Tourism iri kuwedzera. Paunenge uchifamba wakabatikana Kalakaua Avenue muWaikiki kana kunotenga kuAla Moana Center kana snorkeling kuWaikiki Beach, haungazive kuti Hawaii ine hutano hwakanyanya hwakanyanya hwakambonyorwa.
Vazhinji vakazviti zvinokatyamadza. Hawaii yakanyoreswa 622 nyowani COVID-19 makesi nhasi uye vatatu vakafa.
Mavhiki matatu chete apfuura, huwandu hwehutachiona hutsva hwezuva nezuva hwakabva pa3 kusvika 40 kusvika 60 uye izvozvi zvava kupfuura mazana matanhatu. Nhamba yepamusoro yakambonyorwa muHurumende yeHawaii yaive 100 muna Nyamavhuvhu 600, 307.
Vanosvika makumi matatu ezviuru vekuUS vashanyi vekumba vanosvika mu Aloha Taura zuva rega rega, uchisiya ndege zhinji dzichibhururuka dzichikwanisa kuenda kunetiweki inowedzera yemigwagwa mitsva yemumba.
The Hawaii Tourism Chiremera uye Gavhuna weHawaii Ige haasi kutaura nezveindasitiri yekushanya kana achisimbisa kuwedzera kwakanyanya mumatambudziko eCOVID.
Gavhuna, zvakadaro, akaudza eTurboNews:
Zvibvumirano zvekufamba ndezvevatakuri vese, kwete vashanyi chete, uye haasi kufunga nezveshanduko kuchirongwa cheKufamba Kwakachengeteka panguva ino.
Hutachiona uye kushanya zviri kuwedzera muHawaii.
Nhasi, pasina kupokana, iko kuwedzera kwepamusoro kwehutachiona huwandu nguva dzose, uye izvi zvinotyisa.
Mahotera nendege zviri munzvimbo; hapana kana imwe nzvimbo yematauro mujecha pane akawanda emahombekombe.
Iine zana + zuva nezuva kuwanda kwenhamba, nyika yakapinda chakakiyiwa kwakapfuura gore rapfuura, asi ikozvino nemazana matanhatu emakesi, Gavhuna weHawaii achiri kutarisirwa kusimudza zvese zvakasara kana jekiseni rekudzivirira rasvika ku100% yevagari.
Gavhuna Ige vakati mumusangano wevatori venhau nhasi, iyo 70% + nhamba inotarisirwa kusvikwa munaGunyana.
Hawaii yakashandura maitiro ayo ekupindura COVID-19 nemhando dzakasiyana nekufunga nezvezvirambidzo zvaive zvinoenderana nenhamba dzenyaya, izvozvi zvichibva pahuwandu hwevanhu vakabayiwa nhomba mudunhu. Ehezve, vashanyi makumi matatu vanosvika mu Aloha Nyika haina simba pachiyero ichi kana nhamba.
Sekureva kwaGavhuna, vatanhatu kubva zviuru gumi vakabayiwa nhomba vari kutapukirwa, zvichienzaniswa ne6 kubva pa10,000 300 vasina kubayiwa.
Gavhuna akakurudzira kuti munhu wese abayiwa jekiseni, chengetedza chinhambwe chemamita matanhatu kubva kune vamwe, uye pfeka masiki mumba.
Gavhuna haana kuda kutaura nezvazvo eTurboNews mibvunzo nezve mukana wekudzosera zvimwe zvirango panzvimbo, zvinosanganisira miganho yeresitorendi, vashanyi vanosvika, uye nguva dzekudzoka kumba.
Hupfumi hwuri pachena kukunda pamusoro pezvinetso zvehutano zveCOVID, uye Hawaii ikozvino yave kutungamira nyika mune iri meseji, nepo miganhu yenyika dzese dzakaramba dzakavharwa.
Nyamavhuvhu 1, 2021 pa14: 15
Ooooh… zvinotyisa! Tinofanira kugara mukutya! Mhosva HAZVICHipatara, uye vanhu vatatu vanofa kubva pavanhu vanopfuura mamirioni 3 haisi njodzi. Vakafa avo vanhu vatatu 've' covid kana kufa 'ne' covid. Kufutisa uye kushandisa zvinodhaka zvakazara muzvitsuwa… ndeapi mamiriro akange aripo vanhu ava vaive nawo? MISA kutya kutya !!